၃ည/ ၄ရက် စင်ကာပူ ခရီးစဉ်
( ၀၉ ~ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၉ ခရီးစဉ်)
Singapore Airlines, SQ.997 RGN – SIN 10:35 15:10
SilkAirs, MI.518 SINGAPORE – YANGON 15:15 16:40
Day.1: YANGON – SINGAPORE
နံနက် ၁၀း၃၅ နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ Singapore Airlines လေယာဉ် SQ.997 ဖြင့် ထွက်ခွာပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံ ချန်ဂီလေဆိပ်သို့ နေ့လည် ၀၃း၁၀ နာရီအချိန်တွင် ရောက်ရှိပါမည်။ လေဆိပ်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ ကြိုဆိုကာ City Tour အဖြစ် Merlion Park သို့ သွားရောက်ကာ Singapore နိုင်ငံ၏ Landmark တစ်ခုဖြစ်သော Marlion ရုပ်ထုကြီးနှင့် အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြပါမည်။ ထို့နောက် Suntec City နှင့် Esplanade သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကြပါမည်။ ထို့နောက် မြန်မာလူမျိုး အများစုရှိသည့် Peninsula Plaza (City Hall) သို့ သွားရောက် လည်ပတ် လေ့လာကြပါမည်။ ထို့နောက် Parliament House သို့ Tour ကားဖြင့် ဖြတ်သန်း သွားရောက် လေ့လာကြပါမည်။ ထို့နောက် ညစာကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် Local3Star FORT CANNING LODGE @ Orchard Area (or) Similar Hotel သို့ Check in ၀င်၍ အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူကြပါမည်။
Day.2: SINGAPORE SIGHTSEEING
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် တိုက်နံရံများတွင် ဆေးရောင်စုံများဖြင့်ခြယ်ထားသည့် ဆန်းသစ်လှပသည့် အနုပညာ ပန်းချီ လက်ရာ များကို လေ့လာနိုင်ပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးနိုင်သည့် Haji Lane သို့ သွားရောက် လည်ပတ် လေ့လာကြပါမည်။ ထို့နောက် Arab Street နှင့် Little India သို့ သွားရောက်ဈေးဝယ် လည်ပတ်ကြပါမည်။ထို့နောက် နေ့လည်စာ ကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင်ကြပါ မည်။ ထို့နောက် Sentosa Island ထဲသို့ သွားရောက်ပြီး Sentoasa Island ထဲရှိ အကြီးဆုံးရေအောက် ငါးပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်သော Sea Aquarium Museum သို့ ၀င်ရောက် လည်ပတ်ကြပါမည်။ ထို့နောက် Sentoasa Island ထဲရှိ Universal Studios or etc ….. အစရှိသည့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ နေရာများ သို့ မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပြီး သွားရောက် လည်ပတ်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ညစာ ကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင် ကြပါမည်။ ညစာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိတုတယ်သို့ ပြန်၍ အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day.3: SINGAPORE SIGHTSEEING
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် စင်ကာပူ၏ China Town ဧရိယာတွင်ရှိသော Buddha Tooth Relic Temple သို့ သွားရောက် ဖူးမျှော်ကြပါမည်။ ထို့နောက် မိမိ စိတ်ကြိုက် ဈေးဝယ်ထွက်နိုင်ရန် စင်ကာပူ ၏ နာမည်ကြီး Shopping နေရာဖြစ်သည့် Bugis Juncation သို့ သွားရောက် ဈေးဝယ်ထွက်ချိန်ပေးပါမည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာ ကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် နာမည်ကျော် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ် Garden By the Bay သို့ သွားရောက်ကာ ရာသီအလိုက် ပန်းမန်ပန်းခင်းများ စိုက်ပျိုးထားသည့် Flower Dome သို့ သွားရောက် လည်ပတ် ကြပါမည်။ ထို့နောက် ညစာ ကို Local Restaurant သို့ သွားရောက် သုံးဆောင် ကြပါမည်။ ညစာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် Super Tree Light Show သွားရောက် ကြည့်ရှု့ ခံစားကြပါမည်။ ထို့နောက် ဟိတုတယ်သို့ ပြန်၍ အေးချမ်းစွာ အိပ်စက် အနားယူကြပါမည်။
Day.4: SINGAPORE - DEPARTURE
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ် မှ Check out ပြုလုပ်ပြီး Chocolate Shop သို့ သွားရောက်ပြီး မိမိစိတ်ကြိုက် အိမ်ပြန်လက်ဆောင်များ ၀ယ်ယူကြပါမည်။ ထို့နောက် MBS ရှိ Sky Park Observation Deck သို့ တတ်ရောက်ကာ တစ်မြို့လုံး၏ အလှကို ကြည့်ရူခံစားချင် သူများသည် မိမိ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ဝယ်ပြီး တက်ရောက် ကြည့်ရှူ့ နိုင်ပါသည်။ Sky Park Observation Deck သို့ မတက်ရောက်ချင် သူများသည် Casino သို့ သွားရောက် လည်ပတ် လေ့လာကြပါမည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် အတွက် Check in ၀င်ရန် Singapore Changi Airport သို့ ထွက်ခွာကြပါမည်။ လေဆိပ်သို့ ရောက်လျှင် Check in ၀င်ကာ Immigration ဖြတ်ပြီးနောက် နေ့လည် ၀၃း၁၅ နာရီအချိန်တွင် စင်္ကာပူမြို့မှ Silkairs လေယာဉ်အမှတ် MI.518 ဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာကြကာ ဧည့်သည် တော်များသည် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် သို့ ညနေ ၀၄း၄၀ နာရီအချိန်တွင် စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စွာ ပြန်လည် ရောက်ရှိ ကြပါမည်။
၃ည/ ၄ရက် စင်္ကာပူ ခရီးစဉ်
၀၉ ~ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၉ ခရီးစဉ် ဈေးနှုန်း
1. လူကြီးတစ်ဦးဈေးနူန်း	 USD 599 (နှစ်ယောက်တစ်ခန်းနေလျှင်)
2. ၁၁နှစ်အောက်ကလေးတစ်ဦးဈေးနူန်း	 USD 547 (ကုတင်အပိုနှင့်အိပ်လျှင်)
3. ၁၁နှစ်အောက်ကလေးတစ်ဦးဈေးနူန်း USD 506 (မိဘနှင့် ကုတင်အတူအိပ်လျှင်)
4. တစ်ယောက်ခန်းနှင့်နေလျှင် USD 784
၁) အထက်ဖေါ်ပြပါ ခရီးစဉ်ဈေးနူန်းသည် ခရီးစဉ်တွင် ဖေါ်ပြထားသည့်အတိုင်း အကုန်အပြီးအစီး ပါဝင်သောကြောင့် ထပ်မံ၍ ကောက်ခံခြင်းများ လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပါ။
၂) ခရီးစဉ်သွားဖြစ်ရန်သေချာပါက ဖေါ်ပြပါခရီးစဉ်ဈေးနှုန်း၏ 50% ကို ကြိုတင်ငွေ Deposit အဖြစ်ပေးသွင်းရပါမည်။ကျန်ငွေ 50% ကို ခရီးမထွက်ခင် ၁၀ရက် အလိုတွင် ပေးချေရပါမည်။
၃) Final Payment ပေးခြေပြီးနောက် ခရီးမသွားခင် ၁-၃ ရက်အလိုတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မလိုက်ဖြစ်ပါက Cancellation Charges အဖြစ် 100% ကောက်ခံပါမည်။
၁) ဖေါ်ပြပါ Local4Star အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်များတွင် ၃ ညအိပ်တည်းခိုနိုင်မူ (3 Night Accommodations)
၂)5Star အဆင့်ရှိ Singapore Airlines လေယာဉ် အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ် (RGN-SIN-RGN)
၄) ခရီးစဉ်တွင် ဖေါ်ပြထားသော Garden By the Bay (Flowe Dome) နှင့် Sea Aquarium ၀င်ကြေး
၅) ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ နှင့် ညနေစာများ (B=Breakfast/ L=Lunch/ D=Dinner)
၁၀) ခရီးစဉ် တလျှောက် ခရီးသွား အာမခံကြေး
၇) Days2အတွက် ပါဝင်သော ၀န်ဆောင်မှူ့များထဲတွင် ဖော်ပြထားသည့် ၀င်ကြေး မှအပ အခြားသော Sentosa ထဲရှိ Attraction Tickets Fees များ မပါဝင်ပါ။
၈) Day4အတွက် Lunch မပါဝင်ပါ။
၉) Cable Car မပါဝင်ပါ။